Mma - obu nwanyi anya? Oge iji lee anya
Nwa ọdụm dinara n'osimiri na-eleba ụmụ zebra, bụ ndị na-atụtụghị ụkọ ahihia. Onye na-eri anụ na-atụgharị ọsọ na njide na ịchụ nta amalite. Ị nwere ike ịhụ ụkwụ ụkwụ ya na-agbanye n'ala. Anyị na-ekwu banyere mma.
Kedu ihe mara mma
Nwa ọdụm bụ anụmanụ mara mma, magburu onwe ya. Ma ịma mma bụkwa okooko osisi mara mma, nke na-adịghị mma ma dị mkpụmkpụ na ịdị adị ya.
Di na nwunye n'anya mgbe anyanwụ dara - mara mma, nri?
Ka o sina dị, anyị na-enwe ísì ụtọ ya na okooko ya mara mma. Ihe abuo enweghi ihe ozo, ma anyi na-ejiko okwu a bu "mma" ma ha abua.
Gịnị kpatara nke a? Ntak emi nnyịn ikotde idiọk owo emi ẹdude ke idiọk, ndien ke n̄kpri n̄kpri-n̄kpri ye n̄kpri-n̄kpri?
Mma bụ nkịtị
Mma bụ echiche nkịtị na ụgha n'anya onye na-ahụ ya. Ya mere, anyi nwere ndi di iche iche di iche iche mara mma. Mma bụ mmetụta nke kpatara echiche na anya.
Ụkpụrụ ahụ, ịma mma n'anya onye ahụ na-ahụ ya, ma na-agụkwa ụzọ nke ọzọ. N'echiche a, onye ọ bụla nwere mma mara mma na ya. Otu na-ekwu banyere mma ime.
Nke a nwere ike ịbụ ịmụmụ ọnụ ọchị, ihe na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ ihe ngosi. Ma ọ bụ ihe ndị a niile ozugbo. Onye ọ bụla mara mma. Onye obula choro ka amara ya.
Ọ dịghị mma na-enweghị ekele
Iji mepụta mma nke onwe na nke mara ezigbo mma, nwanyi ọ bụla na nwoke ọ bụla aghaghị ịmatakwu ma ghọta ha n'ime onwe ha. Ọ bụrụ na mmadụ egosiputa onwe ya na ọ mara mma, ọ na-emetụ mmetụta dị ukwuu n'ahụ ndị ọzọ.
Onye ahụ mara mma, mara mma ma mara mma. Ọ bụ charisma pụrụ iche nke na-eme ka onye dị mfe ghọọ onye mara mma. Anyị nwere mmasị na amara mmadụ.
Anyị na onye na-enwe ọmịiko ọmịiko na-emekọ ihe. Anyị na-amụmụ ọnụ ọchị na onye bịara abịa n'okporo ámá n'ihi na ọ na-eme ka obi dị anyị ụtọ.
Mma dị onye ọ bụla
Onye ọ bụla mara mma. Ihe ọ bụla e kere eke mara mma. Na ụzọ nke aka ya, foto ọ bụla na ọnọdụ ọ bụla nwere ịma mma nke onwe ya na onye ọ bụla n'ime ya.
Ịmata, ikwupụta na ọbụna ibi ndụ ndị a bụ nkà. Ihe omuma nke enwere ike imuta site na ima na obi.
Ịbụ onye mara mma pụtara ịhụ onwe gị n'anya. Ị ga-abara onwe gị na ndị mmadụ ibe gị ọsọsọ na-enye charisma na chajama mara mma.
Echiche nke "ịma mma - ọ bụ n'anya onye na-ahụ ụzọ?"
4. Nọmba 2018 na 19: 40 elekere
Maka m, ịma mma bụ mgbe ọ bụla gbasara radiation radiation. Onye ọ bụla nke ya na ya na-adị n'udo na-elekwa anya dị jụụ na obi ụtọ n'èzí. Nke a na-emetụta ndị ọzọ karịa ka dị ọcha.